UNHCR oo war kasoo saartay Qaxootiga laga Musaafurinayo Denmark Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka DenmarkUNHCR oo war kasoo saartay Qaxootiga laga Musaafurinayo Denmark
April 11, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Dowlada Denmark ayaa dhawaan bilowday musaafurinta Qaxootiga Suuriya taasi oo sabab ugu dhigeyso in goobaha qaar amaan yihiin
Masuuliyiinta deenishka ayaa la kulmay dhaleeceyn cusub oo ay ku diidayaan ogolaanshaha joogitaanka qaxootiga Siiriya si ay ugu tixgeliyaan xaalada “mid amaan ah” Dimishiq, wadadaas oo Qaramada Midoobay ay sheegtay in aysan jirin wax qiil ah.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ayaa walaac ka muujisay go’aanka Copenhagen, kaasoo soo bilaabmay xagaagii la soo dhaafay, inkasta oo haatan la hakiyay masaafurinta iyadoo la tixgelinayo maqnaanshaha xiriirka ka dhexeeya dowladda Denmark iyo maamulka Suuriya.
“Hay’addu ma tixgelinayso horumarada dhinaca amniga ee dhawaanahan ka socda qaybo ka mid ah Suuriya oo ku filan, xasilloon ama joogto ah si loo caddeeyo in la joojiyo ilaalinta caalamiga ah ee koox kasta oo qaxooti ah,” ayay UNHCR ku tiri hadal ay ka soo saartay magaalada New York , iyada oo intaa ku dartay in “ay sii wadayso baaqeeda. ilaalinta qaxootiga Siiriya iyo dalabyada ah in aan si qasab ah dib loogu celin wadanka.
Tan iyo dhamaadkii Juun 2020, Copenhagen waxay bilawday hanaan baaxad leh oo dib loogu eegayo mid kasta oo ka mid ah 461 faylasha Syria ee laga keenay caasimada Siiriya, iyadoo loo aaneynayo “xaalada haatan ka jirta Dimishiq mar dambe xaq uma lahan (bixinta) ama laguma kordhinayo sharciga deganaanshaha . ” Tani waa go’aankii ugu horreeyay noociisa ee waddan ka tirsan Midowga Yurub.